နောက်ကျပြီဟု ဘယ်သူပြောမှာလဲ (ဖေမြင့်) – Tameelay
နောက်ကျပြီဟု ဘယ်သူပြောမှာလဲ (ဖေမြင့်)
လူအများအပြားကို နှိပ်စက်ခြောက်လှန့်တက်သည့် စကားတစ်ခွန်းရှိသည်။
အထက်တန်းကျောင်းသားဘ၀မှ ကျောင်းထွက်လာခဲ့သူက အနိမ့်စားအလုပ်တွေ လုပ်နေရခြင်းအတွက် စိတ်မချမ်းမသာ ဖြစ်သည်။
ခုနေကျောင်းပြန်တက်ပြီး အတန်းပညာပြည့်စုံအောင် သင်လို့ရရင် သိပ်ကောင်းမည်ဟု တွေးသည်။
သို့သော်၊ “ခုတော့ သိပ်နောက်ကျသွားပြီ“ တဲ့။ သူက ဆိုသည်။
ဇနီးသည်အပေါ် သစ္စာဖောက်ဖျက်ခဲ့မိသည့် ခင်ပွန်းသည်ကလည်း သူ့အိမ်ထောင်ရေးဘ၀ကို အဖတ်ဆည်ချင်သည်။
ပြန်သာယာအောင် ပြုပြင်ချင်သည်။ သို့သော် “သိပ်နောက်ကျသွားပြီ“ ဟု သူက ဆိုနေသည်။
အရက်သောက်လွန်းသဖြင့် အလုပ်မှ ထုတ်ပယ်ခြင်းခံရသူကလည်း အရက်စွဲရောဂါကို ကုစားကာ ဘ၀ကို အသစ်တစ်ဖန် ပြန်စချင်သည်။ သို့သော် “နောက်ကျခဲ့ပြီ“ ဟု မြင်နေသည်။
မိသားစုတွေ ဇနီး ခင်ပွန်းတွေကို ကြည့်လျှင် အချင်းချင်း ပဋိပက္ခမဖြစ်ဖူးသူ အလွန်ပင်နည်းလှကြောင်း တွေ့ရမည်ဖြစ်သည်။
ကတောက်ကဆ ဖြစ်ပြီးစတွင် နှစ်ဖက်စလုံး တင်းမာကာ ပြေရာပြေကြောင်း စကားဆိုလိုသော ဆန္ဒမရှိတက်ကြ။
အချိန်ကြာသည့်အခါ၌မူ စိတ်တွေတော့ ပြေသွားသည်။
ဒေါသထွက်စဉ်က လွန်လွန်ကျွံကျွံပြောခဲ့ဆိုခဲ့ လုပ်ခဲ့မိသည်များ အတွက်
၀န်ချတောင်းပန်ဖို့ကျတော့ အချိန်တွေ သိပ်နောက်ကျသွားပြီဟုခံစာမိတက်ကြပြန်သည်။
သည်လိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးတွေကို ကျွန်တော် အမြဲပြောသည်။
“အဓိပ္ပာယ်မရှိတာ၊ ပြီးခဲ့တဲ့အမှားကို ပြန်ပြေအောင်လုပ်ဖို့ ဘယ်တော့မှ နောက်ကျတယ်လို့ မရှိဘူး၊
ဘယ်ကိစ္စမဆို အသစ်ပြန်စဖို့အတွက် နောက်ကျသွားပြီ ဆိုတာ မရှိဘူး“ ဟူ၍ ။
များမကြာမီက ကျွန်တော် ဂီတပညာရှင်ကြီး ရောဘတ်ရှောအကြောင်း ဆောင်းပါးတစ်ပုဒ် ဖတ်ရ၏။
ရှောမှာ အတ္တလန်တာ ဆင်ဖိုနီ အော်ခက်စတြာအဖွဲ့ တွင် ဂီတဒါရိုက်တာနှင့် တီးဝိုင်းခေါင်းဆောင်အဖြစ် ဆောင်ရွက်နေရာမှအငြိမ်းစားယူတော့မည် ဖြစ်၏။
ရှောနှင့် ကျွန်တော့်ကြားတွင် အဖြစ်အပျက်ကလေးတစ်ခု ရှိခဲ့ဖူးသည်။
ဟိုး…. လွန်ခဲ့သော နှစ်ပေါင်းများစွာ၊ နယူယောက်မြို့တော်ရှိ မာဘယ်ကော်လီဂျီယိတ် ဘုရားကျောင်းတွင် သင်းအုပ်ဆရာအဖြစ်
ကျွန်တော် ၀င်ရောက်စအချိန်က ရှောကျွန်တော့်ထံရောက်ရှိလာကာ ဘုရားရှိခိုးကျောင်းတွင်
တေးသီချင်း သီဆိုမည့် လူငယ်အဖွဲ့တစ်ခု ကျွန်တော်တို့မှာ ရှိသင့်ကြောင်း၊
သည်အဖွဲ့ မျိုးတစ်ခု သူဦးဆောင်နေကြောင်း နှင့် ကျောင်းအတွက်စီစဉ်ပေးနိုင်ကြောင်းများ ပြောဆိုသည်။
သူ့စိတ်ကူးကို ကျွန်တော်သဘောကျသွားသည်။သည်အစီအစဉ်က ကျောင်းအသင်းဝင် လူငယ်များအတွက် နှစ်သက်ဖွယ်ဖြစ်စေလိမ့်မည်ဟု ကျွန်တော်မြင်လိုက်သည်။
သို့နှင့် သူ့အား သူ့အစီအစဉ်အတိုင်း ဆက်လုပ်ရန် တိုက်တွန်းဖြစ်ခဲ့သည်။
အဆိုအဖွဲ့မှ ပုဂ္ဂိုလ်များမှာ တေးသီချင်း သီဆိုရာ၌ အလွန်ပင်
ထက်ထက်သန်သန်ကြိုးကြိုးကြွကြွရှိကြရာ သူတို့ကြောင့် ကျွန်တော်တို့
၀တ်ပြုပွဲမှာ ပို၍ ပြည်ဝစုံလင်လာသည်ဟု ကျွန်တော်တွေးမိခဲ့သည်။
သို့သော် အချို့သော အသင်းသူ အသင်းသားများက သည်အစီအစဉ်ကို သဘောမကျခဲ့။
ပို၍ဆိုးသည်က သဘောမကျသူများထဲတွင် သက်ကြီးဝါကြီး ပုဂ္ဂိုလ်နှစ်ဦးပါနေခြင်းပင်။
သိုတို့က အစဉ်အလာ အစွဲအလမ်း ပြင်းထန်သူများဖြစ်ကြသည်။
တေးဂီတအဖွဲ၏ သီဆိုမှုများသည် မာဘယ် ဘုရားရှိခိုးကျောင်းက
အစဉ်အဆက် လက်ခံကျင့်သုံးခဲ့သည့် လုပ်နည်းလုပ်ဟန်များနှင့် များစွာ
ခြားနားနေသည်ဟု ၄င်းတို့က ယူဆကြသည်။
သူတို့မလိုလား မနှစ်မြို့သည့်အကြောင်း ကျွန်တော်သိမြင်အောင်အထင်အရှားပြသကြသည်။
သို့နှင့် နောက်ဆုံး၌ အကျိုးအကြောင်းမလျော်ကန်မှန်း
သိလျက်နှင့်ပင် ရှောအား ၀မ်းနည်းကြောင်း တောင်းပန်ကာ သူ ကမကထပြုနေသည့်
အစီအစဉ်ကို ရပ်နားရတော့မည် ဖြစ်ကြောင်း ပြောလိုက်ရတော့သည်။
သူ အတော်ကြီး စိတ်ပျက်သွားသည်။ သို့သော် အခြေအနေကို သဘောပေါက်ကြောင်းတော့ သူပြောသွားခဲ့သည်။
သည်အဖြစ်အပျက်သည် ကျွန်တော့်စိတ်ကို အမြဲနှောက်ယှက်ခြောက်လှန့်၍ နေခဲ့သည်။ ကိုယ် ယုံကြည်သည့် အရာကို ဖြစ်အောင် လုပ်ရဲသည့် သတ္တိ ကျွန်တော့မှာ မရှိခဲ့ဘူး မဟုတ်လား။
ယခုဆိုလျှင် သည်ကိစ္စဖြစ်ပွားခဲ့တာ ရာစုနှစ်တစ်ဝက်နီးပါး ကြာခဲ့ပြီ ဖြစ်ပါသည်။ သည်ကာလ တစ်လျှောက်လုံးပင် ရှောနှင့် ကျွန်တော် တွေ့ဆုံပြောဆိုမိခြင်း လုံးဝ မရှိခဲ့။
သို့သော် သူ့အကြောင်း ဆောင်းပါးကို ဖတ်နေခိုက်ကျွန်တော့်ခေါင်းထဲရှိ မှန်မှားသိစိတ်က တစ်ခု သတိဖော်ပေးလာသည်။
ရှောနှင့်ပတ်သက်၍ ကျွန်တော့်ဘက်က အမှားတစ်ခု ကျူးလွန်မိခဲ့ဖူးသည်။ သည်အမှားကို ယနေ့ထိ အမှန်ပြန်မပြင်ရသေးဟူ၍။
သို့နှင့် အိမ်ပြန်ရောက်သည့်အခါ ရောဘတ်ရှောထံစာတစ်စောင် ကျွန်တော်ရေးသည်။ ထိုစဉ်က ကျွန်တော့်ဘကက မှားယွင်းခဲ့သည့် အကြောင်း၊
ယင်းအတွက် တောင်းပန်ကြောင်း ရေးသားလိုက်ခြင်းဖြစ်သည်။
ချက်ချင်းဆိုသလိုပင် ဂီတပညာရှင်ကြီးထံမှ စာတစ်စောင်ပြန်လည်ရောက်ရှိလာသည်။
“သဘောထားကြီးသော၊ ယဉ်ကျေးပျူငှာ၍ ရင်းနှီးပွင့်လင်းမှုလည်းရှိသော“
ထိုပေးစာကို ဖတ်ရသည့် အတွက် ကျွန်တော့်အား ကျေးဇူးတင်ကြောင်းနှင့် ထိုစဉ်က
ဖြစ်ရပ်တွင် ကျွန်တော့်ဘက်ကသာ မဟုတ် သူ့ဘက်ကလည်း ထပ်တူထပ်မျှ
မှားယွင်းမှု ရှိခဲ့ကြောင်း သူ့စာ၌ ဖော်ပြခဲ့သည်။
သည်စာ ဖတ်ရပြီးသည့်နောက် ကျွန်တော် ၀မ်းမြောက် အားတက်သွားလိုက်ပုံမှာ ပြောဖွယ်ရာ မရှိတော့ပေး။
၀န်ချတောင်း ပန်စကားဟူသည် နှစ်ပေါင်းများစွာကြာသော်လည်း နောက်ကျပြီဟူ၍ မရှိကြောင်း
အထင်အရှားပြလိုက်သည့် သာဓကတစ်ခု ပင်တည်း။
သင့်စိတ်ထဲတွင်ကော သည်လိုအတိတ်ဖြစ်ရပ်မျိုးတွေ ပေကတ်ကျန်နေတာ မရှိပေဘူးလား။
သင့်မြတ်ရာသင့်မြတ်ကြောင်း စကားတစ်ခွန်းပြောလိုက်သင့်တာ၊ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးမကျေလည်မှုတစ်ခု ကျေလည်အောင် ဖြေရှင်းလိုက်သင့်တာ၊
ကောင်းသောအမှုတစ်ခု ဆောင်ရွက်သင့်လျက် ပြီးစီးအောင်
အဲသည်ကိစ္စတွေသည် ဖြစ်ပျက်ခဲ့တာ ကြာကောင်း ကြာခဲ့ပါမည်။
သို့သော် နောက်ကျသွားပြီ ဟူ၍ ကား မယူဆပါနှင့်။
အကြောင်းမူ သည်ကိစ္စမျိုးမှာ ဘယ်သောအခါမျှ နောက်ကျပြီ ဟူ၍ မရှိသောကြောင့်ပင်။
မူရင်း။ ။ N.V.Peale ၏ Who Says It’s Too Lat
Posted by steven boii
နောကျကပြွီဟု ဘယျသူပွောမှာလဲ (ဖမွေငျ့)
လူအမြားအပွားကို နှိပျစကျခွောကျလှနျ့တကျသညျ့ စကားတဈခှနျးရှိသညျ။
အထကျတနျးကြောငျးသားဘဝမှ ကြောငျးထှကျလာခဲ့သူက အနိမျ့စားအလုပျတှေ လုပျနရေခွငျးအတှကျ စိတျမခမျြးမသာ ဖွဈသညျ။
ခုနကြေောငျးပွနျတကျပွီး အတနျးပညာပွညျ့စုံအောငျ သငျလို့ရရငျ သိပျကောငျးမညျဟု တှေးသညျ။
သို့သျော၊ “ခုတော့ သိပျနေောကျကသြှားပွီ“ တဲ့။ သူက ဆိုသညျ။
ဇနီးသညျအပျေါ သစ်စာဖောကျဖကျြခဲ့မိသညျ့ ခငျပှနျးသညျကလညျး သူ့အိမျထောငျရေးဘဝကို အဖတျဆညျခငျြသညျ။
ပွနျသာယာအောငျ ပွုပွငျခငျြသညျ။ သို့သျော “သိပျနောကျကသြှားပွီ“ ဟု သူက ဆိုနသေညျ။
အရကျသောကျလှနျးသဖွငျ့ အလုပျမှ ထုတျပယျခွငျးခံရသူကလညျး အရကျစှဲရောဂါကို ကုစားကာ ဘဝကို အသဈတဈဖနျ ပွနျစခငျြသညျ။ သို့သျော “နောကျကခြဲ့ပွီ“ ဟု မွငျနသေညျ။
မိသားစုတှေ ဇနီး ခငျပှနျးတှကေို ကွညျ့လြှငျ အခငျြးခငျြး ပဋိပက်ခမဖွဈဖူးသူ အလှနျပငျနညျးလှကွောငျး တှရေ့မညျဖွဈသညျ။
ကတောကျကဆ ဖွဈပွီးစတှငျ နှဈဖကျစလုံး တငျးမာကာ ပွရောပွကွေောငျး စကားဆိုလိုသော ဆန်ဒမရှိတကျကွ။
အခြိနျကွာသညျ့အခါ၌မူ စိတျတှတေော့ ပွသှေားသညျ။
ဒေါသထှကျစဉျက လှနျလှနျကြှံကြှံပွောခဲ့ဆိုခဲ့ လုပျခဲ့မိသညျမြား အတှကျ
၀နျခတြောငျးပနျဖို့ကတြော့ အခြိနျတှေ သိပျနောကျကသြှားပွီဟုခံစာမိတကျကွပွနျသညျ။
သညျလိုပုဂ်ဂိုလျမြိုးတှကေို ကြှနျတျော အမွဲပွောသညျ။
“အဓိပ်ပာယျမရှိတာ၊ ပွီးခဲ့တဲ့အမှားကို ပွနျပွအေောငျလုပျဖို့ ဘယျတော့မှ နောကျကတြယျလို့ မရှိဘူး၊
ဘယျကိစ်စမဆို အသဈပွနျစဖို့အတှကျ နောကျကသြှားပွီ ဆိုတာ မရှိဘူး“ ဟူ၍ ။
မြားမကွာမီက ကြှနျတျော ဂီတပညာရှငျကွီး ရောဘတျရှောအကွောငျး ဆောငျးပါးတဈပုဒျ ဖတျရ၏။
ရှောမှာ အတ်တလနျတာ ဆငျဖိုနီ အျောခကျစတွာအဖှဲ့ တှငျ ဂီတဒါရိုကျတာနှငျ့ တီးဝိုငျးခေါငျးဆောငျအဖွဈ ဆောငျရှကျနရောမှအငွိမျးစားယူတော့မညျ ဖွဈ၏။
ရှောနှငျ့ ကြှနျတေျာ့ကွားတှငျ အဖွဈအပကျြကလေးတဈခု ရှိခဲ့ဖူးသညျ။
ဟိုး…. လှနျခဲ့သော နှဈပေါငျးမြားစှာ၊ နယူယောကျမွို့တျောရှိ မာဘယျကျောလီဂြီယိတျ ဘုရားကြောငျးတှငျ သငျးအုပျဆရာအဖွဈ
ကြှနျတျော ၀ငျရောကျစအခြိနျက ရှောကြှနျတေျာ့ထံရောကျရှိလာကာ ဘုရားရှိခိုးကြောငျးတှငျ
တေးသီခငျြး သီဆိုမညျ့ လူငယျအဖှဲ့တဈခု ကြှနျတျောတို့မှာ ရှိသငျ့ကွောငျး၊
သညျအဖှဲ့ မြိုးတဈခု သူဦးဆောငျနကွေောငျး နှငျ့ ကြောငျးအတှကျစီစဉျပေးနိုငျကွောငျးမြား ပွောဆိုသညျ။
သူ့စိတျကူးကို ကြှနျတျောသဘောကသြှားသညျ။သညျအစီအစဉျက ကြောငျးအသငျးဝငျ လူငယျမြားအတှကျ နှဈသကျဖှယျဖွဈစလေိမျ့မညျဟု ကြှနျတျောမွငျလိုကျသညျ။
သို့နှငျ့ သူ့အား သူ့အစီအစဉျအတိုငျး ဆကျလုပျရနျ တိုကျတှနျးဖွဈခဲ့သညျ။
အဆိုအဖှဲ့မှ ပုဂ်ဂိုလျမြားမှာ တေးသီခငျြး သီဆိုရာ၌ အလှနျပငျ
ထကျထကျသနျသနျကွိုးကွိုးကွှကွှရှိကွရာ သူတို့ကွောငျ့ ကြှနျတျောတို့
၀တျပွုပှဲမှာ ပို၍ ပွညျဝစုံလငျလာသညျဟု ကြှနျတျောတှေးမိခဲ့သညျ။
သို့သျော အခြို့သော အသငျးသူ အသငျးသားမြားက သညျအစီအစဉျကို သဘောမကခြဲ့။
ပို၍ဆိုးသညျက သဘောမကသြူမြားထဲတှငျ သကျကွီးဝါကွီး ပုဂ်ဂိုလျနှဈဦးပါနခွေငျးပငျ။
သိုတို့က အစဉျအလာ အစှဲအလမျး ပွငျးထနျသူမြားဖွဈကွသညျ။
တေးဂီတအဖှဲ၏ သီဆိုမှုမြားသညျ မာဘယျ ဘုရားရှိခိုးကြောငျးက
အစဉျအဆကျ လကျခံကငျြ့သုံးခဲ့သညျ့ လုပျနညျးလုပျဟနျမြားနှငျ့ မြားစှာ
ခွားနားနသေညျဟု ၄ငျးတို့က ယူဆကွသညျ။
သူတို့မလိုလား မနှဈမွို့သညျ့အကွောငျး ကြှနျတျောသိမွငျအောငျအထငျအရှားပွသကွသညျ။
သို့နှငျ့ နောကျဆုံး၌ အကြိုးအကွောငျးမလြျောကနျမှနျး
သိလကျြနှငျ့ပငျ ရှောအား ၀မျးနညျးကွောငျး တောငျးပနျကာ သူ ကမကထပွုနသေညျ့
အစီအစဉျကို ရပျနားရတော့မညျ ဖွဈကွောငျး ပွောလိုကျရတော့သညျ။
သူ အတျောကွီး စိတျပကျြသှားသညျ။ သို့သျော အခွအေနကေို သဘောပေါကျကွောငျးတော့ သူပွောသှားခဲ့သညျ။
သညျအဖွဈအပကျြသညျ ကြှနျတေျာ့စိတျကို အမွဲနှောကျယှကျခွောကျလှနျ့၍ နခေဲ့သညျ။ ကိုယျ ယုံကွညျသညျ့ အရာကို ဖွဈအောငျ လုပျရဲသညျ့ သတ်တိ ကြှနျတော့မှာ မရှိခဲ့ဘူး မဟုတျလား။
ယခုဆိုလြှငျ သညျကိစ်စဖွဈပှားခဲ့တာ ရာစုနှဈတဈဝကျနီးပါး ကွာခဲ့ပွီ ဖွဈပါသညျ။ သညျကာလ တဈလြှောကျလုံးပငျ ရှောနှငျ့ ကြှနျတျော တှဆေုံ့ပွောဆိုမိခွငျး လုံးဝ မရှိခဲ့။
သို့သျော သူ့အကွောငျး ဆောငျးပါးကို ဖတျနခေိုကျကြှနျတေျာ့ခေါငျးထဲရှိ မှနျမှားသိစိတျက တဈခု သတိဖျောပေးလာသညျ။
ရှောနှငျ့ပတျသကျ၍ ကြှနျတေျာ့ဘကျက အမှားတဈခု ကြူးလှနျမိခဲ့ဖူးသညျ။ သညျအမှားကို ယနထေိ့ အမှနျပွနျမပွငျရသေးဟူ၍။
သို့နှငျ့ အိမျပွနျရောကျသညျ့အခါ ရောဘတျရှောထံစာတဈစောငျ ကြှနျတျောရေးသညျ။ ထိုစဉျက ကြှနျတေျာ့ဘကက မှားယှငျးခဲ့သညျ့ အကွောငျး၊
ယငျးအတှကျ တောငျးပနျကွောငျး ရေးသားလိုကျခွငျးဖွဈသညျ။
ခကျြခငျြးဆိုသလိုပငျ ဂီတပညာရှငျကွီးထံမှ စာတဈစောငျပွနျလညျရောကျရှိလာသညျ။
“သဘောထားကွီးသော၊ ယဉျကြေးပြူငှာ၍ ရငျးနှီးပှငျ့လငျးမှုလညျးရှိသော“
ထိုပေးစာကို ဖတျရသညျ့ အတှကျ ကြှနျတေျာ့အား ကြေးဇူးတငျကွောငျးနှငျ့ ထိုစဉျက
ဖွဈရပျတှငျ ကြှနျတေျာ့ဘကျကသာ မဟုတျ သူ့ဘကျကလညျး ထပျတူထပျမြှ
မှားယှငျးမှု ရှိခဲ့ကွောငျး သူ့စာ၌ ဖျောပွခဲ့သညျ။
သညျစာ ဖတျရပွီးသညျ့နောကျ ကြှနျတျော ၀မျးမွောကျ အားတကျသှားလိုကျပုံမှာ ပွောဖှယျရာ မရှိတော့ပေး။
၀နျခတြောငျး ပနျစကားဟူသညျ နှဈပေါငျးမြားစှာကွာသျောလညျး နောကျကပြွီဟူ၍ မရှိကွောငျး
အထငျအရှားပွလိုကျသညျ့ သာဓကတဈခု ပငျတညျး။
သငျ့စိတျထဲတှငျကော သညျလိုအတိတျဖွဈရပျမြိုးတှေ ပကေတျကနျြနတော မရှိပဘေူးလား။
သငျ့မွတျရာသငျ့မွတျကွောငျး စကားတဈခှနျးပွောလိုကျသငျ့တာ၊ ပုဂ်ဂိုလျရေးမကလြေညျမှုတဈခု ကလြေညျအောငျ ဖွရှေငျးလိုကျသငျ့တာ၊
ကောငျးသောအမှုတဈခု ဆောငျရှကျသငျ့လကျြ ပွီးစီးအောငျ
အဲသညျကိစ်စတှသေညျ ဖွဈပကျြခဲ့တာ ကွာကောငျး ကွာခဲ့ပါမညျ။
သို့သျော နောကျကသြှားပွီ ဟူ၍ ကား မယူဆပါနှငျ့။
အကွောငျးမူ သညျကိစ်စမြိုးမှာ ဘယျသောအခါမြှ နောကျကပြွီ ဟူ၍ မရှိသောကွောငျ့ပငျ။
မူရငျး။ ။ N.V.Peale ၏ Who Says It’s Too Lat
မိဘများ၏ နောက်ဆုံးအချိန် လူ့ဘဝကြီးထဲကို ခေါ်ဆောင်လာခဲ့တဲ့ မိဘများကို နောက်ဆုံးအချိန်မှာ ပျော်အောင် ထားပေးပါ။ မိဘများဟာ လူ့လောကထဲမှာ ရှိနေတုန်း ပြုစုပါ၊ ယုယပေးပါ။ လောကမှာ အစားထိုးမရနိုင်တဲ့ သူတွေဟာ မိဘများပါပဲ။ ယခု သင်ဆင်းရဲချင် ဆင်းရဲလိမ့်မယ်၊ ချမ်းသာချင်လည်း ချမ်းသာလိမ့်မယ်၊ မိသားစု အသိုင်းအဝိုင်း သူငယ်ချင်းတွေနဲ့သာ …
ကျွန်မတစ်ယောက်ထဲ ဆိုပေမယ့် အမြဲတမ်းအတွက် ~~~ သာသာယာယာပါပဲ
မနာလိုသူတွေလား ရှိတာပေါ့ ဒါပေမယ့် ~ သာသာယာယာပါပဲ အဆင်မပြေမှုတွေလား ရှိတာပေါ့ ဒါပေမယ့် ~ သာသာယာယာပါပဲ အခက်အခဲတွေလား ရှိတာပေါ့ ဒါပေမယ့် ~ သာသာယာယာပါပဲ အလိုမကျမှုတွေလား ရှိတာပေါ့ ဒါပေမယ့် ~ သာသာယာယာပါပဲ သဘောထားမတိုက်ဆိုင်မှုတွေလား ရှိတာပေါ့ ဒါပေမယ့် ~ သာသာယာယာပါပဲ …
​ဝေးခဲ့ကြပြီလား…… ​​ဝေးသွားစမ်းပါ့​စေ နီးခြင်း​ဝေးခြင်းဆိုတာ ကိုယ့်​စိတ်​ထဲက သတ်​မှတ်​ချက်​တစ်​ခုပါ။ အကွာအ​ဝေးဆိုတာ စိတ်ရဲ့ အားငယ်​မှုပါ အ​နေနီးသည်​ဖြစ်​​စေ ​ဝေး​နေသည်​ဖြစ်​​စေ ကိုယ့်​စိတ်​ထဲမှာ ရှိ​နေရင်​ နီးနီး​လေးပါပဲ။ ​ပေါင်းစည်း​နေတိုင်း​ရော စိတ်​ထဲမှာ နီး​နေတယ်​ထင်​လား…… လူချင်း​ပေါင်းပြီး စိတ်​​တွေ​ဝေးကွာ​နေကြရတဲ့ အိမ်​​ထောင်​​ရေး​တွေ အများကြီးပါ။ တကယ်​​တော့ နီးခြင်း​ဝေးခြင်းဆိုတာ နှလုံးသားရင်​ခုန်​သံ စည်းချက်​တိုင်းရဲ့ အကွာအ​ဝေးတစ်​ခုပါပဲ။ …